Building early literacy through play somali 2021 | Portland Public Library
Dhismaha akhriska hore ee loo adeegsado riwaayadda
Cunug kasta wuxuu diyaar u yahay in uu wax akhriyo
“Waxyaabaha aad baratid farxad la’aan, waxaad u halmaami doontaa si fudud”
– Maahmaahd hore oo laga soo qaatay Finland
Riwaayadda waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican ay caruurta ku bartaan luqadda iyo xirfadaha akhriska. Riwaayadda waxay caruurta ku kaalmeysaa in ku fakaraan astaamaha: mastarada loo adeegsado sida usha sixirka, maanta waxay noqotaa waqtiyadii ay noolaayeen baahaladii hore, saaxiibka lala cayaaro wuxuu noqdaa duuliyaha sammadda oo sahmiya samada.
Caruurta waxay ogsoon yahiin in hal shay mattali karo shay kale marka loo adeegsado cayaar. Tani waxay kaloo caruurta ku kaalmeysaa in ay fahmaan in erayada qoran u taagan yahiin waxyaabo dhab ah iyo waayo.
Riwaayadda iska dhigidda waxay caruurta ku kaalmeysaa in ay ku fakaraan astaamaha iyo in ay horumariyaan xirfadaha hadalka luqadda. Marka caruurta cayaaraan keydinta ama iska dhigidda xoolaha, waxay ka hadlaan waxa ay sameyaan. Waxay ku celceliyaan fikradaha la raaciyo erayada.
Sheekada cayaarta waxay kaalmo ka geysataa soo saarka xirfadaha sheekada marka caruurta dhisaan sheeko ku saabsan waxay ay ku hawlan yahiin. Tani waxay ku kaalmeysaa iyaga in ay fahmaan sheekooyinka isku xigxiga: kowaad, ku xiga, ugu dambeeyo.
Rumaysiga waxay kaloo caruurta siisaa fursad ay ku fulliyaan xaaladaha dhab-ahaanta nolosha, waxay ku shaqeyaan murugada iyo cabsida, iyo waxay isticmaalaan mala awaalkooda si ay u xalliyaan masalooyinka.
Cayaarta waxay ku kaalmeysaa caruurta in ay dareemaan waxqabad iyo kalsooni. Tani waxay iyaga ku dhiirigelisaa in ay iskudayaan waayo cusub iyo in ay ka tanaasulin marka shayga u muuqdo in uu adag yahay.
Marka shayga lagu cayaaro uu sahlan yahay, waxaa sii adkaada barashada lala kulmo.
Blogyada · Rinjiga · Sheekada riwaayadda · Ciidda · Biyaha ·
Majuujinta cajiinka · Xujada · Kariska
Noocyada barashada loo adeegsado cayaarta:
Cabbirka, qaabka, miisaanka, joogga, qoto dheerida
Tirinta, kala saaridda
Soo jeedinta hiddaha
Fikradaha xisaabta iyo sayniska
➤ Heesidda maalinta oo idil!
(Singing Through Your Day)
➤ Dhismaha akhriska hore ee loo adeegsado riwaayadda
(Building Early Literacy Through Play)
➤ 15 talooyinka kor u akhriska la siiyo waalidiinta ilmaha iyo saanqaadyada
(Read to Me: Read Aloud Tips for Parents)
➤ Maxuu yahay nooca buugga uu cunugeyga u baahan yahay?
(What Kind of Book?)
➤ Cunug kasta oo diyaar u ah in uu wax ku akhristo maktabkaada
(Every Child Ready to Read @ Your Library)